Kudzidzisa Kwamungaita Mwana Wenyu | Mhuri Inofara
SARUDZA MUTAURO Abui Acholi Afrikaans Ahanta Ajië Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Morocco) Arabic (Tunisia Armenian Assamese Ateso Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Balinese Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bomu Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Zimbabwe) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Diola Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Gitonga Greek Greenlandic Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kurdish Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Macedonian Macua Madura Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mandjak Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Meru Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nambya Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pennsylvania German Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Rumanyo Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sranantongo Sunda Susu Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Xârâcùù Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kudzidzisa Kwamungaita Mwana Wenyu
“Mashoko aya andiri kukurayira nhasi anofanira kuva mumwoyo mako; unofanira kuaroverera mumwanakomana wako.”—Dheuteronomio 6:6, 7
Jehovha paakaita urongwa hwemhuri, akaita kuti vana vave mumaoko evabereki vavo. (VaKorose 3:20) Ibasa rako semubereki kuti udzidzise mwana wako kuda Jehovha uye kuti azova munhu anoziva zvaanofanira kuita kana akura. (2 Timoti 1:5; 3:15) Unofanirawo kuziva zviri mumwoyo memwana wako. Muenzaniso wako unokosha zvikuru. Unogona kunyatsodzidzisa mwana wako Shoko raJehovha kana iwe ukatanga waita kuti rive mumwoyo mako.—Pisarema 40:8.
1 ITA KUTI ZVIVE NYORE KUVANA VAKO KUTI VATAURE NEWE
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: ‘Kurumidza kunzwa, unonoke kutaura.’ (Jakobho 1:19) Unoda kuti vana vako vaone kuti vanogona kutaura newe vakasununguka. Vanofanira kuziva kuti wakagadzirira kuteerera pavanenge vachida kutaura. Ita kuti vanzwe vakasununguka kutaura zviri mumwoyo mavo. (Jakobho 3:18) Kana vakafunga kuti uchavataurira zvinovarwadza kana kuti uchakurumidza kufungira zvisiri izvo, vangasakubudira pachena. Iva nemwoyo murefu nevana vako, uye gara uchivavimbisa kuti unovada.—Mateu 3:17; 1 VaKorinde 8:1.
Ipa vana vako nguva pavanoda kutaura newe
Gara uchitaura nevana vako, kwete kungotaura navo chete kana paine matambudziko
2 EDZA KUNZWISISA ZVAVANONYATSOREVA
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Munhu anoratidza kuti ane njere panyaya achawana zvakanaka.” (Zvirevo 16:20) Dzimwe nguva haufaniri kungogumira pakunzwa mashoko anenge achitaurwa nevana vako kuti unzwisise manzwiro avo chaiwo. Zvakajairika kuti vechiduku vataure vachiwedzeredza kana kuti vasingabudisi zvavanenge vachinyatsoreva. “Kana munhu achipindura nyaya asati ainzwa, ihwohwo upenzi.” (Zvirevo 18:13) Usakurumidza kugumbuka.—Zvirevo 19:11.
Edza nepose paunogona napo kuti usadamburira kana kuviruka, pasinei nezvinotaurwa nevana vako
Edza kuyeuka manzwiro awaiita uye zvinhu zvawaiona sezvinokosha pawaiva pazera ravo
3 RATIDZAI KUTI MAKABATANA
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Mwanakomana wangu, teerera kuranga kwababa vako, uye usasiya mutemo waamai vako.” (Zvirevo 1:8) Jehovha akaita kuti vose baba naamai vave nesimba pavana vavo. Munofanira kudzidzisa vana venyu kuti vakuremekedzei uye vakuteererei. (VaEfeso 6:1-3) Vana vanogona kuzviona kana vabereki vavo vasina ‘kunyatsobatana mupfungwa imwe chete.’ (1 VaKorinde 1:10) Kana muine zvamusiri kuwirirana, onai kuti hamuitisani nharo vana venyu varipo nokuti izvi zvinogona kuita kuti kukuremekedzai kwavanoita sevabereki kuve kushoma.
Tauriranai mubvumirane kuti vana venyu muchavaranga sei
Kana iwe nemumwe wako muine maonero akasiyana pakudzidzisa vana venyu, edza kunzwisisa maonero ake
4 RONGAI ZVOKUITA
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Rovedza mukomana maererano nenzira yakamukodzera.” (Zvirevo 22:6) Kudzidzisa vana venyu zvinobudirira hakuitiki netsaona. Munofanira kuronga zvokuita pakudzidzisa vana venyu, zvinosanganisira kuvaranga. (Pisarema 127:4; Zvirevo 29:17) Kuranga hakungorevi kupanicha chete, asi kunobatanidzawo kubatsira vana venyu kuti vanzwisise zvikonzero zvinoita kuti pave nemitemo. (Zvirevo 28:7) Vadzidziseiwo kuti vade Shoko raJehovha uye kuti vanzwisise zvarinotaura. (Pisarema 1:2) Izvi zvichavabatsira kuti vave nehana yakanaka.—VaHebheru 5:14.
Ivai nechokwadi chokuti vana venyu vanoona Mwari seMunhu chaiye wavanogona kuvimba naye
Vabatsirei kuti vazive uye kuti vadzivise zvinhu zvakaipa, zvakadai sezviya zvinowanika paIndaneti uye pamasocial networks. Vadzidzisei kuti vangangwarira sei mabhinya
“Rovedza mukomana maererano nenzira yakamukodzera”
JEHOVHA ACHAKOMBORERA ZVAUNOEDZA KUITA
Somubereki, une basa rinokosha rokudzidzisa mwana wako mafungiro anoita Jehovha. (VaEfeso 6:4) Jehovha anoziva kuti iri ibasa rakakura, asi unogona kuva nechokwadi chokuti zvinozoitika zvichaita kuti Mwari arumbidzwe uye kuti ufare zvikuru.—Zvirevo 23:24.
Ndingaitei kuti mwana wangu agone kutaura neni chero chii zvacho?
Zvii zvandingadzidza pane zviri kuitwa nevamwe vabereki pakurera vana vavo?
Kurera Vana Wanano Uye Mhuri
Mabasa Ekuita Evana
Shandisa mabasa aya ekuita anonakidza anodzidzisa zvemuBhaibheri kuti ubatsire mwana wako kuziva tsika dzakanaka dzinodiwa naMwari.
Unofanira Kuranga Sei Vana Vako?
Bhaibheri rinotsanangura zvinhu zvitatu zvinoita kuti chirango chinyatsoshanda.
Vabereki Vangadzidzisa Sei Vana Vavo Nezvebonde?
Bhaibheri rine mazano akawanda anokubatsirai pakutaura nevana venyu nezvebonde uye pakuvadzivirira pavanhu vanoda zvokubhinya.